Ukhenketho kwiVenkile yeApple, elinye icandelo kwiwebhusayithi yeApple | Ndisuka mac
Ukhenketho kwiVenkile yeApple, elinye icandelo kwiwebhusayithi yeApple
Ngokuqinisekileyo eli candelo elikwiwebhu esele likho kodwa liyinyani ukuba bekunzima ukulifumana. Kwiwebhusayithi ye-Apple sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo kwaye uninzi lwazo ziye zacaca emva kotshintsho lokugqibela olwenziwe izolo nge Namhlanje eApple. Iivenkile ezibonakalayo zabo baseCupertino bahlengahlengisa ukuphucula isibonelelo sabo nangona iyinto esele ishunyayelwe ukusukela oko yaqalwa, kodwa ngezinye izinto ezingathandekiyo kunye nokuchukumisa okutsha kwiwebhu bayitshintshile indlela yokuyikhangela. Ngale ndlela, bahlulahlulahlula ezinye iindlela ezikhoyo kwaye beqaqambisa ezinye ebezivulwe ixesha elide kodwa ngoku bonwabela ukufikelela ngokulula njengokucwangcisa Ukhenketho kwiVenkile yeApple.
Ukhenketho kwiVenkile yeApple
Kweli candelo lewebhu Uyakufumana into oyifunayo ukuze ucwangcise uhambo oluya kwivenkile ye-Apple oyikhethileyo kunye nabafundi okanye naphakathi kootitshala ngokwabo. I-Apple yenza kube lula kwabo bafuna ukutyelela iivenkile zayo Banokukwenza ngokwamaqela kwaye ngendlela emnandi. Ukongeza, abafundi banokwenza iiprojekthi ezandisa izinto abazibonileyo eklasini kwaye bafumanise ukuba banokuba nezinto ezintsha kangakanani na kwiimveliso zorhwebo. Ngokucacileyo yinto ethile ngokuzithandela kodwa kuqinisekile ukuba nawuphi na umfundi angathanda ukutyelela enye yeevenkile zeApple kwaye "acofe" iimveliso zabo iiyure ezimbalwa.
Yiza nabafundi bakho okanye abanye ootitshala kuhambo lwentsimi kwiVenkile yeApple ukuze ufumane amava emfundo angalibalekiyo. Abafundi banokungena ngqo kwaye basebenzise iimveliso zeApple ukuvumela iingcinga zabo ukuba ziqhube zasendle kwiiprojekthi zabo. Sifuna ukuba ootitshala nabafundi bashiye uhambo beqinisekile ukuba ngokuzinikela, ukufunda kunye nobuchule akukho luvo lungenakwenzeka.
Eli candelo lewebhusayithi ngoku liyabonakala kwimenyu esezantsi kwiphepha le-Apple, apho sifumana icandelo elithile le-Apple Campus (ikhonkco kwiwebhusayithi yeSpanish ayisebenzi) kunye nolunye uluhlu oluneziza ezi-odolwe kakuhle. Ukuba ukhe ufune ukufumana into ethile enje ngezemali, umxholo wohambo kwiivenkile zeApple, iziqinisekiso, iinkonzo okanye yonke into enxulumene newebhu, ungaya emazantsi ephepha kwaye uyakufumana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukhenketho kwiVenkile yeApple, elinye icandelo kwiwebhusayithi yeApple
Guqula iinkumbulo zakho zibe zizilayidi ezimangalisayo zoMenzi weSilayidi seHD
Lungisa izitya zemifuno ezimnandi kunye neeRipespe ezivela kuEmilia